ကိုရီးယား ဝက်သားပေါင်း Korean Steamed Pork | MyFood Myanmar
ကိုရီးယား - Korean | နိုင်ငံတကာ အစားစာများ - International Food | ဝက်သား - Pork | အပေါင်း - Steamed
ဝက်သား - ၁ ကီလို
ဂျပန်ကြက်သွန်မြိတ် - အနည်းငယ်
ငရုပ်သီးစိမ်း - ၂ တောင့်
ဂျင်း - ၃၀ ဂရမ်
ငရုပ်ကောင်းအစေ့ - (လဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက်)
ကြက်သွန်ဖြူ - (စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်း)
ဆန်ဝိုင်(ဆန်အရက်ပေါ့) - စားပွဲတင်ဇွန်း ၄ ဇွန်း
ကိုရီးယားပဲအနှစ် - (စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်း)
ရေ - (အနည်းငယ်)
ပထမဆုံး ပုံတွင်ပြထားသည့် ဝက်သားလိုမျိုး ဝက်ဗိုက်သားကို ရေစင်အောင်ဆေးပြီး အိုးထဲထည့် ၊ ကြက်သွန်နီ ဥကြီး တစ်လုံးကို လေးစိတ်ခွဲထည့် ၊ ဂျပန် ကြက်သွန်မြိတ်ကို အဆင်ပြေသလို လှီးထည့် (ဒါတွေက အနံ့အတွက်ပဲ ယူတာပါ ။ စားလို့ မရပါဘူး ။ ဝက်သား တစ်ခုပဲ ဆယ်ပြီး စားမှာ) ဂျင်း နှင့် ကြက်သွန်ဖြူ ကိုပါ ဓားပြားရိုက်ပြီးထည့် ၊ ငရုပ်ကောင်းအစေ့ ၊ ကိုရီးယား ပဲအနှစ်(ပုံတွင်ပြထားပါသည် ။) ထည့်ပြီး ဆန်ဝိုင်(ဆန်အရက်) ထည့်ပါ ။ ထို့နောက် အိုးထဲသို့ ရေထည့်ပြီး မီးတစ်ဝက် (မီးအေးအေးဖြင့်) အိုးအဖုံး ပိတ်ပြီး ၁ နာရီခွဲခန့်ပေါင်းပါ ။ အိုးက ရိုးရိုးအိုးဆိုလဲ ရပါတယ် ပေါင်းအိုး မလိုပါဘူး ။
ကိုရီးယား ဝက်သားပေါင်းမှာ အရောင်နှစ်မျိုး ရှိပါတယ် ။ အဖြူရောင်နှင့် အညိုရောင် အညိုရောင် ကြိုက်ရင် ပေါင်းတဲ့ အထဲ ပဲငံပြာရည် အနောက် အနည်းငယ် ထည့်လိုက်ပါ ။ ဒီထဲမှာတော့ ကိုရီးယား ပဲအနှစ်က ရယ်ရီမိတ်ဗူး စီးတီးမက်မှာ ရောင်းပါတယ် ။ ဂျပန် ကြက်သွန်မြိတ်ဆိုတာ ကတော့ မြန်မာ ကြက်သွန်မြိတ် ထက် အလုံး ပိုကြီး ပါတယ် ။
3. ၁ နာရီခွဲ ကြာလို့ ဝက်သားနူးရင် ဆယ်ယူပြီး ၂ မိနစ် ၊ ၃ မိနစ်လောက် အအေးခံပြီး ဒယ်အိုးပြား တစ်ခုကို အပူပေးပြီး ဝက်သား မျက်နှာပြင် ဟိုဘက် ဒီဘက်ကို ဒယ်အိုးဖြင့် ထိပေးပါ ။ (ဆီလုံးဝမထည့်ပါနဲ့) အနံ့မွှေးပြီး အသားမျက်နှာပြင် ရဲရဲလေးဖြစ်အောင် ကင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် ။ ထို့နောက် ပုံတွင် ပြထားသည့် အတိုင်း ညီညာစွာ လှီးပြီး ဆလက်ရွက် ၊ ကင်ချီ တို့ဖြင့် ရောလိပ်ပြီး စားသုံးနိုင်ပါသည် ။ သူ့ရဲ့ပဲဆော့လေးဖြင့် တို့စားရင်လည်း အလွန်ကောင်းပါသည် ။
1. ကိုရီးယားပဲအနှစ်ဆော့ သုံးဆ(သုံးဇွန်း) ၊ ကိုရီးယား ငရုပ်သီးဆော့ တစ်ဆ(တစ်ဇွန်း) ကိုရောမွှေပါ ။ ပြောင်းဖူးရည် (ငါးဇွန်းထည့်) ၊ သကြား တစ်ဇွန်း ထည့် ၊ ငရုပ်သီးစိမ်း အတောင့်ရှည် ၊ ကြက်သွန်နီ ၊ ကြက်သွန်ဖြူ အနည်းငယ်စီ ရောထည့်ပြီး ကြိတ်စက်ဖြင့် ကြိတ်ပါ ။ ဆော့ထဲ ထည့်ပြီး ရောမွှေ ရပါသည် ။ (ကိုရီးယားငရုပ်သီးဆော့ + ပြောင်းဖူးရည်) ဗူးအသေးလေးတွေ ရောင်းပါတယ် ။ မေးပြီး ဝယ်ကြည့် ကြပါ ။